NGOBUSUKU: UKUJONGWA KWEALBHAMU YANGOKUHLWA - IINDABA
Amaqela ka-Ian MacKaye kunye nowayesakuba sisigubhu se-Warmers / u-Amy Farina kwi-LP yakhe yokuqala yezinto ezintsha ukusukela kwi-Fugazi's The Argument. I-albhamu ibonakalisa ukuthamba okukhohlisayo okungekhoyo kwimizamo yangaphambili ye-MacKaye, ubumnandi obubekekileyo, obususa ubumnandi obenza oku kube ngathi ngowona msebenzi wakhe wobuntu ukuza kuthi ga ngoku.
Sele kuyiminyaka emine ezeleyo okoko kukhululwe i-Fugazi's Impikiswano , ethi, ngomgama othile, ifaneleke njengeyona spell inde yomileyo yento entsha ka-Ian MacKaye kwindawo yakhe eshicilelweyo, engama-20 nangaphezulu yokurekhoda unyaka. Abathembekileyo baseFugazi, nangona kunjalo, baya kuqhubeka nokulinda kwabo ngomonde kumculo omtsha kwiqela elipheleleyo: UMacKaye endaweni yoko ujike iliso- ubuncinci okwangoku- kwiprojekthi entsha, Evens.
abantu abadala bayathetha
I-duo equka iMacKaye kunye nowayesakuba sisigubhu seWarmers / u-Amy Farina, i-Evens distill ye-Fugazi's locomotive post-hardcore ukuya kwi-barest yayo ebalulekileyo. Sisebenzisa amazwi atyebileyo afudumeleyo kunye nokufudumala okufudumeleyo kwegitare ye-baritone, i-Evens iphinde yajongana nemixholo engagungqiyo yomsebenzi kaMacKaye osusela kwiintsuku zakhe zoSoyiso oluncinci: ukudelela ubuzwilakhe begunya elincinci, ukothuka kukwahlukana kwabahlali bendawo, kunye inkolelo enomdla wokucinga nzulu kunye nokuzithemba. Kodwa enkosi ekusondeleni kwendlela yasebusuku (kunye nakwindlela ephuculweyo yokuphucula umculo), i-albhamu ibonakalisa isisa esikhohlisayo esingafane sibonakale kwimizamo yangaphambili ye-MacKaye, ukubuyisela umva, ukuphelisa ubumnandi obubangela ukuhlwa ' igama lokuqala lokuziva ungowona msebenzi wakhe wobuntu ukuza kuthi ga ngoku.
Ngorhatya ngokuqinisekileyo igcwele izityhilelo, hayi ubuncinci bokusebenza ngokukuko kwelizwi lokucula likaMacKaye. Nangona i-melodic Fugazi ilandelela Impikiswano '' Cashout 'okanye' Ndidiniwe 'ukusuka kwi Isixhobo Ingoma yesandi ichaze amathuba abanzi kuluhlu lwezwi lakhe, umsebenzi wakhe apha umele ixesha lokuqala ukushiya ngokupheleleyo uphawu lwentengiso i-rottweiler bark ye-albhamu iyonke. Apha amazwi akhe abonakala ngokukodwa xa edibene nekaFarina, enelizwi elingenalifu elingenaqhwithi lingqina ukuba lingumdlalo ofanelekileyo wokuhambisa kukaMacKaye.
UFarina, nangona kunjalo, ukude ngokuba ngumdlali oxhasayo weMacKaye, kwaye uzinze njengeqabane elinikwe ngokupheleleyo. Izwi lakhe elikhokelayo kumkhondo onjenge 'Around the Corner' kunye 'Ukuba Ngamanzi' kukhuthaza iinkumbulo ezimnandi zeminyaka ye-90's ye-femy ekhokelwa ngabasetyhini njenge-Tsunami okanye i-Scrawl, kunye nomdlalo wakhe wokuqamba, owenzelwe ukukhumbuza umphulaphuli ukuba uyadika njani kwaye yinto efundiswayo uninzi lwedrum-based drumming injalo. Xa edibene noMacKaye ongenasiphelo, odlala isigingci sebaritone, isigubhu sakhe esisezantsi sinokuphosa umkhondo (ngakumbi 'uSara Lee' okanye 'UkuMkhumbuza ishishini lakhe') ekuthandeni, phantse ii-hues zangasemva kwetye, ezinikezela i-albhamu ngokucacileyo ngokucacileyo ubunzulu bentsimi, ngaphandle kwephalethi elula, ethobekileyo.
Nangona amandla ombane ahamba ngathi 'Zonke ezi Rhuluneli' kwaye 'Awuyi kuva Into' upakishe eyokuqala eyomeleleyo ukukhaba i-mule-kick (enxulumene ngokusondeleyo neengoma zikaFugazi ezinje ngo 'Gcina Amehlo Akho Avulekile' okanye 'Great Cop', zombini ezi ngoma ziza zixhotyisiwe ngokuthe ngqo kwi-MacKaye choruses ezinje, 'Baza kukubetha ngenyaniso ukuze ungabuva ubuxoki') Ngorhatya 'awona maxesha akhumbulekayo ayenzeka kwimizobo esondeleyo' yokusikelelwa hayi ngethamsanqa, 'okanye ukuvula' indawo yokuhlala yesibini '. Ukwenza ikhathalogu yeenkcukacha zemizuzu yobudlelwane obutsha, 'iShelter Two' yenza uhambo oluya kwivenkile yesixhobo sehardware enjenge-adventure ephezulu, njengoko uMacKaye noFarina bacula, 'Siyaqhubeka nokunyuka kodwa asikaze sifumane okuphezulu / Konke ukuhla ukusuka apha,' kwii-Exene-kunye noJohn Doe ezingafundiswanga, zibonisa kakuhle ukubaluleka kwezi zinto zibalulekileyo, zibonakala zingenamsebenzi nezihlala zibalulekile ebomini bethu.
Kukho amaxesha apho i-albhamu ngokusondeleyo ifana nethambo, iidemo ezingagqitywanga ezenze ukuba zikhule Isixhobo Isandi, kunye nabanye apho umntu engenakukunceda kodwa acinge ukuba uFugazi angaziphatha njani ezi ngoma. (Ndiyarhanela ukuba icandelo lesingqisho laseCanty / iLally linokuphazamisa 'Awuyi kuva Nto' kwimeko-okanye ubuncinci ndingathanda ukubava bezama.) Ekugqibeleni, nangona kunjalo, eli qela lingaziwayo alizisi nje kuphela Ubusuku njengeqela elihluke ngokupheleleyo nelibalulekileyo, kodwa ikwanemidlalo iMacKaye ebengenakukwazi ukuyenza kuwo nawuphi na umxholo.
i-albhamu yomculo kamikaze
amagcisa atyelele ngo-2020
thanda wena: krazula
Iqela lezopolitiko lekraft punk
I-orchestra yokufa engaziwayo yabantu abanetyala